Safiirka Burundi oo waraaqihiisa aqoonisag u gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta warqadihii aqoonsiga ee danjirenimo ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda Burundi ee ay u soo magacawday Soomaaliya, Danjire Joseph Nkurunziza.
Madaxweyne Xasan iyo Danjiraha Burundi ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka midtahay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal ka dhaxeeya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Danjiraha Burundi Joseph Nkurunziza uu Madaxweynuhu ka guddoomay warqadihiisa aqoonsiga ee safiirnimo, isagoo u rajeeyay in uu si hufan u guto howsha loo igmaday.
Danjire Joseph Nkurunziza ayaa waxa uu carabaabay inuu ka shaqeyn doono xoojinta iyo horumarinta xiriirka labada dal iyo wax waliba oo u adeegaya danaha wadaagga ah ee Soomaaliya iyo Burundi.
Arrintaan ayaa lagu tilmaamay mid qeyb ka aha dadaallada ay dowladda Soomaaliya ugu jirto inay xoojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka caalamka.